Isikhokelo esiphezulu kwiDihydroboldenone / iDHB yoKwakha
Yonke into malunga neDihydroboldenone
1.Yintoni i-Dihydroboldenone / i-DHB? 2. I-Dihydroboldenone / DHB isilinganiso
3.Dihydroboldenone / umjikelezo weDHB 4.Dihydroboldenone / DHB iziphumo
I-5.Dihydroboldenone / i-DHB nemiphumo emibi 6.Dihydroboldenone / DHB ubomi besiqingatha
7.Dihydroboldenone / DHB yokusika 8.Dihydroboldenone / DHB yokukhwela
I-9.Dihydroboldenone / i-DHB inzuzo I-10.Dihydroboldenone / i-DHB ukuhlaziywa
11.Dihydroboldenone / DHB ukuthengiswa 12.Dihydroboldenone / 1-Testosterone ukwenzela ukwakha umzimba
1. Yintoni iDihydroboldenone / DHB?
Dihydroboldenone (65-06-5) ngokubhekiselele kuwo DHB i-steroid enamandla eyenza iziphumo eziphezulu, ngakumbi kubakhi bomzimba, abagijimi kunye nabaqhubi. Abantu abaninzi badibanisa i-DHB kunye novavanyo lwe-Methyl 1 ngenxa yegama layo elingu-1-testosterone. Nangona kunjalo, ezi zi yobisi zihlukile, kwaye zombini zivelisa iziphumo ezahlukeneyo kunye nemiphumo emibi. Isilwanyana saziwa ukuba siphakathi kwe-steroids enamandla kakhulu esinika iziphumo eziphezulu kubo bonke abasebenzisi bayo. I-Dihydroboldenone yi-5-alpha i-Boldenone eyancitshiswayo isizathu sokuba igama layo. Konke Okufuneka Ukwazi Ngo-Anavar (Oxandrolone) yoKwakha
Xa kuthelekiswa ne testosterone, i-DHB iphindwe kabini i-anabolic kunye ne-androgenic encinane. Nangona kunjalo, iziphumo ezinamandla zeziyobisi zingenakugwetywa ngokulula kuba abaninzi abagijimi bakhetha ukusebenzisa i-Primobolan. I-Dihydroboldenone iyaziwa ngokunyusa ukukhula kwemisipha, yenza kube nzima kwaye kuphuculwe amandla omzimba jikelele. I-DHB yamandla enamandla e-anabolic yenza ukuba i-steroid ibe nefuthe elithembekileyo kunye nefuthe ngeempembelelo ezimbalwa. Isiza sisebenza ngokugqwesileyo kulawulo lwe-SHGB ngaphandle kwemiphumo emibi.
Xa kuthathwa ngokuchanekileyo i-steroid ikhuthaza ukuveliswa kwemisipha emzimbeni kunye nokuyigcina ilukhuni kwaye iqinile. Ukwakha umzimba, kufuneka uhambe kunye nalo msebenzi ochanekileyo ukuphuma kwiziphumo eziphezulu. I-DTH iyimodemoni yendalo eyenzeka emzimbeni wakho emva kokuguqulwa kwe testosterone. Kanye njengamanye ama-steroids anesiphelo somzimba ukuba aguquke kwi-DTH ne-DHB, i-testosterone iguqulela kwi-estrogen kunye ne-DTH. Ngokuxhomekeke kwinqanaba lakho lokusetyenziswa, ugqirha kufuneka akukhokele ekunqumeni isilinganiselo esifanelekileyo. Ukuze ukhusele, uviwo lwezonyango lufanele lwenziwe ngaphambi nangemva kokugqiba umjikelo wokuqala. Amalungu omntu asabela ngokungafaniyo nakwezinye izidakamizwa ukwenzela ukuba i-steroids, ngoko ke ukulawulwa kwonyango olufutshane kubalulekile kwimiphumo engcono.
Dihydroboldenone (65-06-5), njengamanye ama-steroids uye wadlala indima ephambili ekuncediseni abadlali ukuba bafezekise iinjongo zabo ngokubonelela amandla kunye nokukhula kwemisipha yomgangatho. Isilwayo sinemiphumo emibi yecala eyenza ukuba ibe yinto efanelekileyo kubaninzi bezakhiwo zomzimba. I-Dihydroboldenone i-anabolic kakhulu ithetha ukuba iyakwazi ukubonelela izihlunu ezixhamle kubasebenzisi bayo. Isiza asikwandisi ukugcinwa kwamanzi kwiimisipha kwaye kunemiphumo emihle. Ngamafutshane, ukuba ufuna i-steroid eya kukunceda ufumane imisipha kwaye uphucule ukusebenza kwakho, ngoko i-DHB yinto efanelekileyo kakhulu.
Ubuninzi benkxalabo kubasebenzisi beDihydroboldenone, i-pain injection post, engafanele ikunqande ukuba isebenzise le mveliso ngokuthelekiswa neziphumo eziza kuzinikela. Isiza linikeza amandla omzimba okwenza abasebenzisi basebenze ixesha elide baze bafezekise iziphumo ezifunwayo. Abahamba ngeebhayisikili banamandla okwaneleyo okuzisebenzisa kunye nokukhuphisana ngexesha lokhuphiswano. Abanye abasebenzisi bakhononda ngeentlungu ukuya kwii-7 iintsuku emva kweenjini. Nangona kunjalo, ugqirha wakho unokukunceda ukulawula ingxaki, kodwa ukusetyenziswa kweoli echitshiweyo njenge-stérilizer kunokukunceda. Ngaphandle koko, isicatshulwa sihlala sisithandwa kubadlali abaninzi abadlali. Ngakolunye uhlangothi, kubalulekile ukuthenga i-steroid kumthengisi onokwethenjelwa kwaye onamava obonelela ngemveliso esemgangathweni kunye nokunikezelwa ngexesha.
2. I-Dihydroboldenone / DHB isilinganiso
Imilinganiselo yeDHB efanelekileyo ukusuka kwi-300 ukuya ku-400mg ngeveki kubasebenzisi besilisa. Isiza esinokusetyenziswa kwakhona ngabagijimi basetyhini kodwa kumasenti aphantsi. Kwabadlali beentombi, kucetyiswa ukuba baqale ngeepayipi eziphantsi kakhulu ukukhusela iziphumo ezimbi ezinjengezityalo. Isistim kubadlali bezemidlalo kufuneka sibe phakathi kwe-25 ukuya kwi-100mgs ngeveki. Nangona kunjalo, kubafazi abanamava amaninzi kunye ne-anabolic steroids, i-dosage ingancitshiswa ngugqirha, kwaye yonyuswa kamva emva kokugqiba umjikelezo wokuqala. Okufanayo kusebenza kumadoda; Abaqalayo kufuneka baphephe i-dihydroboldenone i-dosages ephezulu kwaye bahlale bebonisana nogqirha ngaphambi kokunyusa amanani.
The Dihydroboldenone i-frequency frequency incike kwi-ester eqhotyoshelwe kwinqanaba, kodwa loo nto ayichaphazeli amayeza. Okwangoku, i-cypionate yiyona ester eqhelekileyo isetyenziswe ekuveliseni kwesi sidakamizwa. Umlinganiselo wesigxina wesilisa usuka kwi-200mgs ukuya kwi-400mgs ngeveki kungakhathaliseki ukuba i-ester ibandakanyeke. Ugqirha wakho kufuneka ke akukhokele ukuba uqinisekise ukuba ugcina amanqanaba afanelekileyo kwiziphumo ezingcono. Xa uthathwa ngomlomo, isicatshulwa siya kuthathwa rhoqo rhoqo kune-injection. I-Dihydroboldenone inobuthakathaka kakhulu kwifom yomlomo kwaye inobomi obufutshane kakhulu.
Ngakolunye uhlangothi, umyinge womlomo awufumanekanga ngenxa yokuba awuxutywanga kunye kwaye unceda ekukhuseleni ukuba uphuhliswe ngesibindi. Xa ukhetha ifom ye-dihydroboldenone ye-injection, kuphela i-100-200mgs ngeveki iza kubakho iziphumo ezingcono. Khumbula, ukuba i-doses ejoyiweyo kufuneka ilawulwe ngunyango lwezonyango okanye ukuba unesakhono kuyo kwaye unokuzifaka. Musa ukubeka ingozi xa ungaqinisekanga malunga nalo ukuphepha iingxaki ezingaphezulu.
Ngamanye amaxesha, ugqirha unokunyanzeliswa ukwandisa okanye ukunciphisa umyinge emva kokuvavanya imeko yakho yonyango. Abagijimi abaninzi benza iphutha lokuthenga izilwanyana ngqo kwiimarike kwaye basebenzise ngaphandle kokubandakanya ugqirha. Amalungu oluntu ahluke kwaye nje ngenxa yokuba umkhiqizo usebenza kumhlobo wakho akuthethi ukuba uya kuphelela. Abanye abantu baya kufuna iimitha eziphezulu ukuqala ngelixa ezinye iilayi eziphantsi kakhulu ziya kufezeka. Njalo ugxininise ugqirha, umqeqeshi, kunye nesondlo sezondlo kwiziphumo ezingcono. Ngamanye amaxesha ama-dosages athiwa ngumenzi angasenakukusebenzela okanye angabangela imiphumo emibi.
3. Umjikelezo weDihydroboldenone / DHB
Ngokuqhelekileyo, abaninzi abasebenzisi baqala imijikelezo yabo ngemiyalelo yomlomo ngaphambi kokuba bayifake nge-400-500mgs ye-DHB ngeveki kunye ne-testosterone ende ende. Kucebise ukuba uquke i-inhibitor ye-aromatase kumjikelezo we-DHB ukulinganisela i-estrogen kwi-testosterone. Ukongeza, ungasebenzisa izongezelelo zenkxaso ezifana neN2Guard. Dibana nodokotela wakho ngolwazi olungakumbi kwaye udibanise umjikelezo ongcono ngokuphathelele iimfuno zakho okanye iziphumo ezifunwayo. Ezinye izijikelezo zingaba zide kunezinye, kuxhomekeke kwinqanaba lokusebenzisa lomdlali. Abasebenzisi be-hardcore banomjikelezo omkhulu weDihydroboldenone kunabalandeli. Ukujikeleza umjikelezo kunye nokujikeleza ukujikeleza kuyahluke kwaye kwaxutywa kunye nezixhobo ezahlukeneyo. Ukuba uthe wugqiba umjikelo kwaye uhluleka ukufumana iziphumo ezifunwayo okanye ufumana iziphumo ezimbi ezimbi, xela ugqirha wakho.
4. Iziphumo zeDihydroboldenone / DHB
The DHB iziphumo ukuba uya kufumana kuxhomekeke kwindlela osebenzisa ngayo iziyobisi nendlela ohamba ngayo kunye nezinye iimfuno ezifana nokusebenza kunye nokutya. Kulabo abayisebenzisayo bafumana iziphumo ezilungileyo kwaye bafezekise iziphumo zabo ezifunwayo. I-Dihydroboldenone ayithathwa njengeyodwa ye-anabolic steroids, kodwa inika iziphumo eziphezulu kubasebenzisi abaninzi. Isilwazi saziwa ngokunika abasebenzisi amandla ukuhlakulela imisipha eqinile neyomeleleyo. Injongo yawo wonke umakhi womzimba ukukhula kunye nobuthakathaka obuya kubavumela ukuba bancintisane ngempumelelo. I-Dihydroboldenone yi-steroid eqinisekisa ukuba imisipha yomgangatho wabasebenzisi ngexesha elifutshane kunokwenzeka. Ukuhambelana nomyinge kunye nezongezelelo zenkxaso kuya kuba yimbono enkulu ekufezeni iziphumo ezifunwayo.
Isichengisiso sandisa kwakhona amandla omzimba jikelele oya kwenza abadlali basebenze ixesha elide kwaye bafumane lula izihlunu. Injongo ephambili kuyo yonke i-athlete kukuba iphumelele emsebenzini wakhe, kwaye yile nto idihydroboldenone. Uninzi lwabadlali abaye basebenzisa le michiza banikeze ingxelo emihle kwaye bayidumise ngokubenza bakwazi ukunqoba iziqendu ezahlukeneyo emva kokugqiba ngempumelelo umjikelo wokulinganisa. Kwiimeko ezininzi, abadlali abaphumelelanga ukuphumelela ngenxa yokungabi namandla, kodwa yile ngxaki eya kuxazululwa ngexesha lokugqiba umjikelo wakho weDHB. Ukuba ungeke ufumane iziphumo emva komjikelo wakho, qhagamshelana nogqirha wakho ukuze uncedise ngakumbi. Ezinye iziphumo ezinokubangela iziphumo ezichaphazelekayo ukuba unqumla okanye uhambelane nemiyalelo yesigqirha.
5. Imiphumo emibi yeDhydroboldenone / DHB
I-1-Testosterone (65-06-5) yi-steroid ephezulu kakhulu eye yaguqulwa ngezikhathi ezithile ukuphucula izibonelelo zayo nokunciphisa imiphumo emibi. Nangona kunjalo, ngenxa yobunzima bokubunjwa komzimba womntu, abaninzi abasebenzisi baneempembelelo ezahlukeneyo emva kokusebenzisa i-steroid. Ngamanye amaxesha abasebenzisi bafumana iimpembelelo ezikhawulezileyo baqala umjikelo wabo kwaye ke, kucetyiswa ukuba uxelele ugqirha wakho ngexesha. Ugqirha unokunciphisa umyinge kwaye ukuba awusebenzi yena / unokuyeka umjikelezo wonke. Kwezinye iimeko, abasebenzisi bafumana iimpembelelo zecala kamva emva kokugqiba umjikelo. Nazi ezinye zezinto eziqhelekileyo dihydroboldenone imiphumela;
Iilenki ezibuhlungu - abaninzi abasebenzisi bayakhononda iintlungu kwiindawo ezingenayo i-injection apho ngamanye amaxesha kunokuhamba malunga neveki. Enyanisweni, le ngenye yeengxaki eziqhelekileyo abaninzi abajongana nomzimba xa beya kwi-steroid ye-injection. Nangona kunjalo, ungatshintshela kumlingo womlomo, nangona ungaphantsi kunamandla xa uthelekiswa nentsholongwane. Ukuqwalasela imiphumo yesirya oyinayo onokuyonwabela, ngoko iintlungu akufanele zikunqande ukufikelela kwiinjongo zakho.
Ukulahleka kweenwele: ngamanye amaxesha xa kuphelile, i-steroid ingaba nefuthe ngqo kwizinwele zakho zokukhula. Nangona kunjalo, ukunxibelelana nodokotela wakho ngexesha kunokunceda ukulawula ingxaki. Ezinye iziphumo ezichaphazelekayo zibandakanya, ukwehla kwamathambo, kubangela umonakalo kwisibindi kunye nokuchaphazela intliziyo yakho kunye nokusebenza kwesibindi. Le miphumo iyaqhelekileyo kulabo abadlula i-steroid okanye bayisebenzise ngaphandle kokuhlolwa kwezobugcisa. Ngamanye amaxesha izimo zomzimba zinokunyusa ukwanda kwemiphumo emibi.
Kubasetyhini, i-steroid inokukhokelela ekuphuhlisweni kweempawu zamadoda ezifana nokukhula kwemisipha nokunyaniseka kwezwi phakathi kwabanye. Ngoko ke, a mabhinqa kufuneka athathe le steroid ngokuqaphela aze amamathele kumyalelo wokusetyenziswa kwegqirha ukuze kubekho iziphumo ezingcono. Ingxaki ebalulekileyo nale steroid kukuba iziphumo azikho ngokukhawuleza, oku kuthetha ukugqithisa kakhulu namhlanje kungabonakali nemiphumo, kodwa unokuba nakho kwixesha elizayo. Mhlawumbi, yeso sizathu sokuba abasebenzisi abaninzi be-steroid badibanise ukuyisebenzisa. Ukuba unamathela kwimimiselo yokusetyenziswa ngoko uya kuba kwicala elikhuselekileyo.
6. I-Dihydroboldenone / DHB ubomi bemizuzu
I-DHB inamathele ngokutsha kwi-ester eyongeza i-DHB ubuncwane bemihla ngeentsuku ze-8-10, kwaye yimiba isilwayo singeniswa emva kweentsuku ze-4 okanye ze-6. Ugqirha wakho uya kukwenza umjikelo kwaye uhlalutye amaxesha amanqanaba afanelekileyo ngokuxhomekeka kwi-ester eqhotyoshelweyo kunye neziphumo ezifunwayo. Emva kokugqiba umjikelo wakho, i-DHB ihlala isebenza emzimbeni wakho malunga neeveki ze-5 ngaphambi kokuba iphela yinkqubo yakho yomzimba. Kwakhona ixesha elithathwayo lokucoca kwinkqubo yomzimba liya kuxhomekeka kwi-ester eqhotyoshelwe kwi-DHB. Ngoko ke, ukuba uya kukhuphisana kwimincintiswano engavumeli ukusetyenziswa kwe-steroids, xelela ugqirha wakho, ukubonelela ngonyango olungcono kakhulu oza kutshabalala ngexesha elifutshane kunokwenzeka.
Imilinganiselo ye-Oral DHB yomlomo ine-half-life-short short and is stronger than the injection. I-dose yomlomo, ngoko ke, ithetha ukuba uya kuthatha ixesha eliphindaphindiweyo njengemihla ngemihla ukuze ufumane iziphumo ezifunwayo. Nangona kunjalo, i-bodybuilders ihamba ngokunyuka ukuba ivalwe yintsholongwane ngenxa yokuba inamandla kunye nokuba nethuba lokulahleka umyinge lincinci kakhulu. Uyakufuna kuphela ukujoba isilwanyana kanye ngeveki. Ukuba awunakuxhamla kunye neenjini, ungathetha nogqirha wakho ukubonelela ngomlomo.
7. I-Dihydroboldenone / iDHB yokusika
Ukujikeleza kwe-DHB ekwakheni umzimba kukunceda ukususa amafutha omzimba okungadingekile okanye ukugcinwa kwamanzi kwiimisipha ngenjongo yokufezekisa imisipha enesisindo. Apha umgomo wakho ukuchitha amaninzi amaninzi njengoko unakho kwaye ufezekise izidumbu zakho ezinqwenelekayo okanye ukuma komzimba. I-DHB iye yanceda abadlali abaninzi kwimigangatho yabo yokusika, kwaye yintoni eyenza i-steroid eyaziwayo phakathi kwabadlali be-elite. Xa ukubethelwa ngokufanelekileyo kukutshisa amafutha omzimba okweqile kwaye ekugqibeleni kubonakalisa yonke imizimba yomzimba. Ukusika kwakhona kunceda ekuncedeni ababuciko bomzimba ukuba bafezekise imizimba yomzimba kunye nezihlunu ezinamandla. Xhagamshelana nogqirha wakho, ukubonelela ngeyona ndlela engcono kunye neyosebenzayo yokujikeleza kwe-DHB.
8. I-Dihydroboldenone / i-DHB yokukhwela
Apha uzimisele ukufumana amaninzi kunye nobukhulu. I-DHB inezixhobo ezimangalisayo ezenza kube lula kubadlali bezemidlalo, ngoko ke izixhobo zomzimba. Umjikelezo we-dihydroboldenone ukukhwela ukubandakanya ukuthatha ama-dosage aphezulu ngeveki nje ngo-400 ukuya kwi-500mgs kunye nokutya okufanelekileyo. I-steroid ine-rekodi ephezulu kakhulu ekuncedeni abadlali ukuba bafumane ubunqunu bomzimba kunye nezihlunu eziqinile. Khumbula ukubukela ukutya kwakho kunye nokusebenzela iziphumo ezingcono. Isikhokelo esiphezulu seStananol (Winstrol) sokwakha izakhiwo
Ubume be DHB ukukhwela i-dosage iya kugqitywa yi-ester eqhotyoshelwe kuyo. Ugqirha wakho uya kuba yindawo efanelekileyo yokumisela amanani afanelekileyo kuwe. Ngokuxhomekeke ekubunjweni komzimba kwaye udinga ugqirha uya kukwenza iinqununu zokuxhaswa eziza kunceda ufikelele kwiziphumo ezifunwayo lula. Kuyabasetyhini, inqubo efanayo iya kusebenza, kodwa i-dosages iya kuba isezantsi ukukhusela ukuphuhliswa kweempawu zesintu.
9. I-Dihydroboldenone / i-DHB inzuzo
Iintlawulo ze-DHB kubaninzi kubasebenzisi bayo ngokukodwa abaqeqeshi bomzimba. Isiza sichaza njengenye ye-anabolic steroids enamandla nangona ingahambelani namanye amaqhosha adumile. Kwiphepha, le nkunkuma ibonakala ingacinci, kodwa abo basebenzayo baye bavakalisa iziphumo ezilungileyo. I-DHB ivuselela ukukhula kwemisipha kunye nokuphucula amandla omzimba jikelele. Abadlali bebhola bathatha i-steroids ukubanceda ekwakheni imisipha enamandla kwaye bafumane amandla okukhuphisana kunye nokusebenza ngokuchanekileyo. Ukusuka kwiingxelo zabathengi kwiiplani ezahlukeneyo, i-DHB ayisoze iphoxe. Abasebenzisi abaninzi babonisa impumelelo yabo kwimisebenzi yabo yezemidlalo kulo mziza.
Ukongezelela, i-dihydroboldenone ayikhuthazi ukugcinwa kwamanzi kwimisipha okanye i-aromatize. Ngoko ke, xa uthatha iziyobisi, uya kuqinisekiswa ngokufumana izihlunu ezisemgangathweni kunye nokunciphisa amafutha omzimba ngokugqithiseleyo. Ukutyunjwa, ichiza isebenza ngokufanelekileyo kunye nezinye izongezo. Xa ujikeleza okanye ujikeleza, ungaqiniseka ukuba i-steroid iya kunika iziphumo ezilungileyo.
I-DHB nayo ineziphumo ezincinci ezimbalwa xa kuthelekiswa nezinye i-steroids ezenza kube lula kubadlali nabadlali bezakhono. Iimbaleki zesifazana zingasebenzisa kwakhona i-steroid kodwa kwi-dosages ephantsi; linikeza impembelelo efanayo. Abagijimi besifazana basebenzisa le michiza ukuphucula ukusebenza kwabo kunye nokuphucula amandla abo omzimba. Abasetyhini bayacetyiswa ukuba baqaphele ngelixa besetyenziswe le chiza. Iingcali zincoma ukuba abafazi abakhulelweyo mabaqwalasele ukuhlala kude nale steroid kuba kunokuchaphazela umntwana ongakazalwa.
I-Dihydroboldenone ikhona kwimilo yomlomo kunye ne-injection. Ngoko ke, ukunika iindlela zokusebenzisa umlinganiselo womsebenzisi. Ukuba ungeyonto efanelekileyo ngenxa yeentlungu ngenxa yeentlungu unokukhetha umlinganiselo womlomo. Abantu abaninzi bakhononda ukuba ii-injection ze-DHB zibuhlungu kwaye ezinye iintlungu zihlala kwithuba leveki, imeko ephazamisa abanye abasebenzisi.
Nangona kunjalo, oku akufanele kukuthintele ukufikelela kwiinjongo zakho. Yazisa ugqirha wakho ukuba akunike umthamo womlomo nakuba kuya kufuneka uwathabathe ngokuphindaphindiweyo kune-injection. Ngakolunye uhlangothi, uninzi lweempembelelo ze-dihydroboldenone zilawulwa ngokubambisana nemiyalelo yesigqirha. Ngamafutshane, akukho nto inokukhathazeka ngayo xa usebenzisa le steroid, ngokude nje xa uquka uchwepheshe wezonyango kwinkqubo yonke.
10. Ukuhlaziywa kweDihydroboldenone / iDHB
I-Dihydroboldenone ifumene iimpendulo ezihlukeneyo kunye neengxelo ze-DHB kubathengi abahlukeneyo. Abanye ababuciko bomzimba baye banikezela ngokucacileyo xa abanye bekhalaza ngokungayifumani iziphumo abazifunayo. Nangona kunjalo, uninzi lwabadlali be-elite abaye basebenzisa i-steroid ixesha elide bonke bayavuya kwaye banomdla wokuphumelela kwi-dihydroboldenone. Ukujonga ukuhlolwa kweemveliso ezahlukileyo, kucacile ukuba abasebenzisi abaninzi banelisekile ngeziphumo izidakamizwa zinikeza. Abanye abasebenzisi bayonwabile ukuba baye bazuza iimfono eziphezulu kwaye bafumana amandla omzimba jikelele. Ngakolunye uhlangothi, abanye abasebenzisi banomuvo wokuba isicatshulwa sinempahla efana ne-thermogenic ye-trenbolone equka ukubangelwa ukusila ngokukhawuleza nokukhupha.
Ukongezelela, abadlali ababalaseleyo bavakalisa uvuyo lwabo ngenxa yokuba umkhiqizo awukhathazi isondlo, ngaloo ndlela ukwenza kube yinto encedisayo kakhulu yokujikeleza. Kukho abo bavakalisa amava amachiza kunye neziyobisi ngokugqithiseleyo ukwenzela ukuba iintlungu zentlungu. Abanye abasebenzisi be-dihydroboldenone bathi bamele banamnxeba iintlungu ze-injection malunga neentsuku ze-7. Iinjongo zeentlungu ziqhelekileyo kwaye zilawulwa xa uzisa ugqirha wakho ngexesha.
Njengoko kushiwo ngaphambili, imizimba yabantu isabela ngendlela eyahlukeneyo kwimveliso eyahlukeneyo ngakumbi i-steroids. Abanye abantu baziva behlelekile ngeenjini xa abanye beziva bengakhululekile. Iziphumo ezichaphazelekayo zixhalabisa kakhulu abasebenzisi abaninzi. Kukho abo bakhonkcoza iintloko ezinzima, ukulala, kunye nokukhukhuma ngokweqile. Yonke le miba ingasombulula xa uhamba ukuhlolwa kwezokwelapha ngaphambi kokuba uqale ukusebenzisa i-steroid kunye neemviwo eziqhelekileyo njengoko uqhubeka nomjikelezo wakho. Nje ngezinye i-anabolic steroids, i-dihydroboldenone iyancipha. Ngaloo ndlela, ityrapy ye-post-cycle efanele (PCT) kufuneka iqhutywe, kwaye inkxaso yokuxhaswa kufuneka ifakwe kwiimjikelezo.
11. I-Dihydroboldenone / iDHB yokuthengisa
Njengomdlali wezemidlalo, awukwazi ukubeka ingozi kumsebenzi wakho ngokuthenga i-DHB ukuthengiswa kumathengisi angathembekanga nabangenamava. Indlela yodwa yokufumana iimveliso ezinobuninzi ngokuzifumana kumvelisi owaziwayo okanye onamava okanye umthengisi. Okwangoku, imarike ikhutshwe ngabathengisi abaningi be-steroid kunye nemikhiqizo kodwa ukuba babekho kwicala elikhuselekileyo; kufuneka uhlukanise okwenyaniso kumankohliso. Ezinye iimveliso kwiimarike zingenakuhamba kakuhle ngomzimba wakho. Singumenzi we-DHB ongcono kunye nomthengisi. Senza ukuhanjiswa emhlabeni wonke, kwaye ufuna kuphela ukwenza umyalelo wakho kwiwebhusayithi yethu, kwaye siya kuhambisa ngexesha elifutshane kunokwenzeka. Siyaqonda ukuba ixabiso lemali liphambili. Ngaloo ndlela ixabiso lethu elifanelekileyo alichaphazeli umgangatho weemveliso zethu.
Ku-BUYAAS, unako Thenga iDHB ngobuninzi okanye nokuba wenze umyalelo okwaneleyo womjikelezo wakho naliphi ixesha ukusuka kwintuthuzelo yendlu yakho. Sineendlela zokukhokha eziguquguqukayo ukulungiselela bonke abathengi bethu. Ukuthenga kunye nathi kukunika uxolo kwengqondo, kwaye unokuqiniseka ngokufumana iziphumo ozifunayo. Sisoloko sicebisa bonke abathengi bethu ukuba benze uphando lweemarike ngaphambi kokumisela nayiphi na umthengisi we-DHB. Yiya kwi-Dihydroboldenone / DHB umenzi onjengeBUYAAS lonke ixesha. Khumbula ukuba i-steroids ingabangela iziphumo ezimbi emzimbeni wakho ukuba uthatha umgangatho ophantsi okanye mhlawumbi ungaxhomekekanga kwizinto eziphathekayo. Kukho ezininzi iimveliso ze-steroid ezikhohlisayo, kwaye ukuba awunelanga, ungase uwele emicimbeni yazo njengoko iimveliso zingabizi ngaphantsi kunezona zinyani.
IWebhusayithi yethu iyasebenziseka; Ngoko ke kulula ukuyithenga i-Dihydroboldenone / iDHB kwi-PC yakho, i-laptop okanye i-smartphone. Senza i-quality steroids ehlukeneyo ngaphandle kwe-dihydroboldenone.
Khumbula ukuba unakho ukuthenga i-Dihydroboldenone powder kwiwebsite yethu. Nangona kunjalo, sikhuthaza abathengi bethu ukuba baqonde umthetho welizwe malunga naluphi na umkhiqizo abathenga kuwo. Amanye amazwe anqongqo kwaye adinga imvume okanye ugqirha wegulane ngaphambi kokungenisa okanye ukuthenga ii-steroids ezithile. Isishwankathelo, siyiNtengiso yokuThola Abaxhasi beDihydroboldenone jikelele, kwaye zonke iimveliso zethu ziqinisekisiwe kwaye ziqinisekiswe yiyo yonke imibutho yomgangatho wehlabathi jikelele. Kucelwa uqinisekise ukuba uya kuviwo lwezokwelapha ngaphambi kokuba uqale ukusebenzisa iimveliso zethu ukuphepha ukufumana iziphumo ezimbi
12. I-Dihydroboldenone / iDHB (1-Testosterone) yokwakha umzimba
I-DHB ibe ngumkhiqizo obalulekileyo kumashishini wokwakha umzimba kwaye ibonakaliswe ngokungathandabuzekiyo yokuba iyakwazi ukuhambisa iziphumo ezithembisa. Ngokomzekelo, phantse bonke abagijimi abaye basebenzisa iDHB baye babika iziphumo ezintle. Isilwanyana sivuselela ukukhula kwemisipha kunye nokuphucula amandla omzimba kwaye ekugqibeleni ukwandisa ukusebenza. I-Dihydroboldenone iye yadunyiswa ngenxa yendima yayo kokubini kunye nokusika. Xa usebenzisa le michiza, unesizathu sokukhathazeka ngokugcinwa kwamanzi kunye nokunambitheka kwamanzi njengoko kungabangeli nayiphi na ingxaki. Imiphumo emibi ayifani ngokuthelekiswa namanye ama-steroids, ngoko ke, ulungile ukuhamba xa wenza umyalelo wakho namhlanje.
Ukuhambelana nomjikelezo wakho ngokutya okufanelekileyo kunye nokusebenza kuya kuba yinto efanelekileyo yokufikelela kwiziphumo eziphezulu. Isilwanyana asichaphazeli ukutya kwakho, intsingiselo ngexesha lokujikeleza unokufumana ukutya okufanelekileyo ngaphandle kwengxaki. Ukunamathela kwisilinganisi esifanelekileyo kukho enye into ofuna ukugxila kuyo, ngelixa ujikelezayo. Umqeqeshi wakho kunye nogqirha wakho ngabantu abangcono kakhulu ukukukhokela ngexesha lohambo lwakho lomzimba. I-DHB inepropati ekhethekileyo ekunikezela ngemisipha eqinile, eqinile neyamehlo leyo yonke iminqweno yomzimba. Kwimijikelezo yokusika, ukuxaka i-steroid kunye nezinye izongezo kuya kunceda ekufubeni amafutha omzimba angafunekiyo. I-Dihydroboldenone isebenza kakuhle kunye nezinye izongezelelo zenkxaso, kwaye isiqingatha-ubomi buya kuxhomekeka kwi-ester eqhotyoshelweyo.
Akukho sizathu sokungabaza ubuchule be-DHB njengoko kuye kwamangalisa kubo bonke abasebenzisi abathembele kuyo. Nangona iziphumo azikho ngokukhawuleza, ekupheleni komjikelo uya kufumana imisipha ephezulu kwaye ufumane amandla okukuthatha kuzo zonke iiseshoni zokuqeqesha kunye nokukhuphisana ngokufanelekileyo. Ukuba uthatha inxaxheba kwimincintiswano engavumelekanga ukusebenzisa i-steroids, akukho nto inokukhathazeka ngayo, njengoko izidalwa zinyamalala emzimbeni wakho emva kweeveki ze-5 ekugqityeni umjikelezo. Ngaloo ndlela, cwangcisa ngexesha elifanelekileyo kwaye ubukele umsebenzi wakho ukhule ube phezulu.
Kazlauskas, R. (2010). Steroids. Ngaphakathi Ukutshatyalaliswa kwezemidlalo kwiMidlalo: iMigaqo-nkqubo ye-Biochemical, Imiphumo kunye nohlalutyo(iphe. 155-185). Springer, Berlin, Heidelberg.
Ulwaphulo-mthetho, iPI (2011). Ukuqhaqhazela ukukhula kweMiscle. Ukuvutha, 5.
Magdziak, K., Osman, N., Tvaroha, A., Ding, J., & Fagan, JM (2011). I-pro-hormones kunye neZitho zoMzimba: Zingakanani izinto ezininzi?